Maamulka G/Nugaal oo sheegay inay dhawaan maxkamad la soo taagayo dadkii diley shiikh C/qaadir Nuur Farax – Radio Daljir
Maarso 12, 2013 4:32 b 0
Garoowe,12,March,2013 Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) oo waraysi siiyey radio Daljir ayaa sheegay in dhawaan maxkamad la soo taagi doono dadkii ka danbeeyey Dilkii Shiikh Cabdul qaadir Nuur Faarax oo 15 Febaraayo lagu diley magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Mr (Qarjab) ayaa sheegay inay ka maamul ahaan sameeyeen qorshe lagu adkaynayo guud ahaanba ammaanka Gobolka isagoo intaasi ku daray in la adkeeyey baaritaanka guud gobolka Nugaal,
Radio Daljir ayaa waydiiyey gudoomiyaha sida ugu haboon ee ay ammaanka gobolka iskaga kaashan karraan shacabka? iyo ciidamada ammaanku.
Dawladdu waxaa ay samaynasaa qorshaha ugu fiican ee looga wada shaqayn karo ammaanka Gobolka laakiin shacabku waa inay raacaan nidaamka ay dawladdu u dajiysey in lagu adkeeyo ammaanka,sidaas waxaa ku jawaabey gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) oo u waramayey radio Daljir.
Magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa mudooyinkaan danbe waxaa ka socotey baaritaano iyo qorshayaal lagu adkaynayo ammaanka guud ee magaalada waxaana ay ciidamada ammaanku ku hawlanyihiin baaritaanada koontaroolada laga soo galo magaalada iyo kuwa laga boxo,sidoo kale waxaa laga bilaabay xaafadaha magaalada baaritaano aan horay uga jirin ?kuwaas oo ay iska kaashanayaan ciidamada ammaanka iyo qaybo ka mid ah shacabka magaalada.